बालबालिका विशेष – Word of Truth, Nepal
April 21, 2021 /in बालबालिका विशेष /by Pradesh Shrestha
April 15, 2021 /in बालबालिका विशेष /by Pradesh Shrestha
December 4, 2020 /in बालबालिका विशेष /by Pradesh Shrestha
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2020/06/Ant1.png 1080 1920 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-12-04 15:48:282020-12-04 17:24:34पिकनिक जाने कमिला
कुखुराको पसिना आउँदैन। किन होला, बाबु नानीहरू, कहिल्यै सोचेका छौ? मैले सुनेअनुसार, कुखुराको जीउको तापक्रम प्राय: १०५ देखि १०७ डिग्री से० हुन्छ। हाम्रो चाहिँ ९८.६ डिग्री से० हुन्छ र त्योभन्दा बढी हुँदा हामीलाई पसिना आउन थाल्छ, तर कुखुरालाई भने आउँदैन। परमेश्वरले उसलाई त्यस्तै बनाउनुभयो किनभने कुखुरा यताउता गर्दा उसको जीउले जमिन झण्डै झण्डै छुन खोज्छ अनि गर्मीमा जमिन तात्छ अनि त्यसको जीउको तापक्रम हाम्रो जस्तो हुँदो हो त त्यसलाई निकै कष्ट पर्न जान्थ्यो।
तिमीलाई थाह छ? एउटा तेर्सो लट्ठामाथि कुखुरा टुक्रुक्क बस्न सक्छ अनि उसले आफ्‍नो टाउको पखेटाभित्र घुसारेर त्यहीँ रातभरि मज्जासित घुर्दै सुत्न सक्छ अनि त्यो खस्दा पनि खस्दैन।कसरी? तिमीले त्यसो गरी हेर न एक रात एउटा लट्ठामा टुक्रुक्क बसेर निदाउन खोज्न! हो, परमेश्वरले तिमीलाई कुखुरा जस्तो बनाउनुभएको छैन। के तिमीले कहिल्यै कुखुराको खुट्टालाई राम्ररी हेरेका छौ? छैन भने, त्यसो गर्नु राम्रो हुन्छ। कुनै बेला आमाले कुखुराको मासु पकाउनलाई त्यसलाई काटकुट गर्नुहुँदा, त्यसको घुँडालाई हेर जहाँ आमाले काट्नुहुन्छ र त्यस भागमा हुने एउटा सेतो, टल्कने नसालाई ख्याल गर। नसालाई तिमीले तान्यौ भने, कुखुराका औंलाहरू बन्द हुन्छन् अनि छोडिदियौ भने ती औंला खुल्छन्। कसरी?
सबै घर पालुवा चराहरू – कुखुरा, कनेरी चरा, रातो चरा, कालो चरा, रबिन चराका यस्तै बनोटका खुट्टा हुन्छन्। अघिल्तिरका तीनओटा औंलादेखिका नसाहरू उसको पैतालाको बीच भागसम्म पुगेका हुन्छन् र पछिल्तिरको औंलाको नसा पैतालाको त्यही बीच भागसम्म पुगेको हुन्छ अनि त्यहाँ ती नसाहरू जोडिन्छन् र एउटै नसा बन्छन्। योचाहिँ घुमेर उसको गोलीगाँठोको अघिल्तिर आइपुग्छ, त्यो एउटा बाटो भएर मास्तिर गएको हुन्छ र एउटा नली भएर घुँडालाई पार गरेको हुन्छ र त्यसपछि त्यसको फिलामाथि फैलिएर गएको हुन्छ। जब कुखुरा बस्छ, त्यसको नसा तन्किन्छ र त्यसले औंलाहरूलाई तान्छ र बन्द गरिदिन्छ। कुखुराले अब चाहेर पनि औंलाहरूलाई खोल्न सक्दैन, औंला खोल्न त्यो उठ्नैपर्छ। जब त्यो उठ्छ हुन्छ नसा तन्किन छोड्छ अनि औंलाहरू खुल्न सक्छन्। कुखुराले आफू बसिरहेको ठाउँमा केवल बसिराख्नु मात्र पर्छ र हावाहुरी चले पनि उसलाई उडाएर लैजान सक्दैन!
जङ्गली, मांसहारी चराहरू यस्ता हुँदैनन्। चील, बाज र लाटो कोसेरोका नङ्रा हुन्छन् जसलाई उनीहरूले आफ्‍नो जीउदेखि सीधा पारेर पूरै तन्काउँदा पनि बन्द हुने गर्दैनन्। परमेश्वरले तिनीहरूलाई त्यस्तै बनाउनुभयो यस हेतुले कि तिनीहरूले स‍ाना-साना जन्तुलाई च्याप्प समात्न सकून् र पक्रेपछि उनीहरूले त्यसलाई आफूबाट अलिक पर रहने गरी त्यसलाई बलियोसँग समातिराख्न सक्छन्। यदि ती नङ्रा भएका आफ्‍ना औंलाहरूलाई बन्द गर्नलाई त्यसले खुट्टालाई आफ्‍नो जीउतिर तान्नुपर्ने हुँदो हो त त्यसले बोक्दै गरेको सानो खरायो वा सर्प वा जेसुकै होस्, त्यसले उसलाई टोक्न सक्थ्यो अनि त्यो चील वा बाजको छातीलाई च्यातिदिन सक्थ्यो। परमेश्वर ज्यादै बुद्धिमानी र असल हुनुहुन्छ। आफ्नो सृष्टिले जस्तो जीवन जिएको चाहनुहुन्छ त्यस्तै जीवन जिउन सकोस् भनेर उहाँले सबै प्राणीहरूलाई ठिक-ठिक तरिकाले मिलाउन जान्नुहुन्छ। अनि बाबुनानीहरूहो, यसैकारण तिमीले आफ्‍नो जीवन र हृदय लिएर उहाँकहाँ आएको र उहाँमाथि भरोसा गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ। तब तिमीले जस्तो किसिमको जीवन जिएको उहाँ चाहनुहुन्छ त्यस्तो जीवन जिउन सक्ने तिमीलाई बनाउनुहुन्छ। “म ख्रीष्टसित क्रूसमा टाँगिएको छु तरै पनि जिउँछु; त्यसो भए पनि म ता होइन तर ख्रीष्ट मभित्र जिउनुहुनछ; अनि जुन जीवन म अहिले शरीरमा जिउँछु, त्यो म परमेश्वरको पुत्रमाथिको विश्वासद्वारा जिउँछु, जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो र आफैलाई मेरा निम्ति दिहाल्नुभयो” (गलाती २:२०)।
भाले कुखुरा विचित्र पंक्षी हो, होइन र? तर उनीहरूका केही अति राम्रा कुरा छन् जो बाबुनानीहरूले देखासिकी गर्नुपर्छ। पहिलो त, उनीहरू बिहान सबेरै उठ्छन् र परमेश्वरले उसलाई दिनुभएको कुकुरी-काँ गरी बास्ने काम गर्न थाल्छन्। आठ बजेसम्म सुतेर बस्ने भाले कतै कसैले देखेको छ र?
भाले कुखुराले “म कोइली चरीले जस्तो गाउन सक्दिनँ, त्यसैले म अब बास्नै छोड्छु” भनेर भन्दैन। उसले एउटा जुरेली वा बुलबुल चरोको देखासिकी गर्न खोज्दा पनि खोज्दैन। उसले आफूले जेगर्न सक्छ त्यही काम उसले सक्दो राम्रोसित गरिरहन्छ।
उसले यत्नपूर्वक यस्तो काम गर्छ जसको लागि उसले कहिल्यै प्रशंसा पाउँदैन। के तिमीले कसैले कुखुराको भालेलाई उसले राम्ररी कुकुरी-काँ गर्दै बासेको हुनाले उसलाई प्रशंसा गरिरेहको देखेका छौ। तर प्रशंसा पाएन भन्दैमा कुखुराको भाले बास्न छोड्दैन।
कुखुराको भालेको काम रमाइलो काम त होइन। उसको काम सुतेकाहरूलाई उठाउनु हो। त्यो बारम्बार गरिनुपर्ने काम हो तर यो सेवा गरिदिनेलाई कसैले धन्यवाद दिँदैन।
बास्ने भालेले असल खबर ल्याउँदछ। उसले हामीलाई भन्छ, एउटा नयाँ दिन आइपुग्यो जुन दिन हामीले हाम्रा प्रभुलाई चिन्न सकौं र उहाँको सेवा गर्न सकौं। भाले भरपर्दो हुन्छ, ऊ दृढतापूर्वक लागिरहन्छ। ऊ विज्ञापन गर्ने काममा अति उत्तम छ। उसले आफ्‍ना सहकर्मीहरूले खोरमा के कसो गर्दैछन् भन्ने कुरा बताउने गर्छन् किनभने कुखुरीले अण्डा पार्छे र भालेले त्यसको बारेमा कुकुरी-काँ गर्छ।
आफूले बारम्बार एउटै काम कति गर्नुपरेको भनेर कुखुराको भालेले कहिल्यै गुनासो गर्दैन। केवल उसले बास्ने काम गर्छ — ऊ बिहान बास्छ अनि दिँउसो, बिहानको नास्ता अगाडि अनि साँझको खाना खाएपछि — तर उसले खुशीसाथ त्यो गर्छ। नानीहरूहो, तिमीहरूले सिक्नुपर्ने यी असल पाठहरू हुन् अनि म आशा गर्छु तिमीहरूले यो सिक्नेछौ।
मैले तिमीहरूलाई कुखुराको अण्डाको बारेमा केही कुरा बताउनुपर्छ। तिमीले यदि एउटा अण्डालाई प्लेटमाथि वा टेबुलमाथि राखेर फननन्न घुमाइदियौ भने पनि, अथवा अरू जेसुकै गर्‍यो भनेपनि, तिमीले अण्डाभित्रको पहेंलो भागलाई भित्रपट्टि रहेको त्यसको ठाउँबाट त्यसलाई उलटपुलट हुने गरी सार्न सक्दैनौ। परमेश्वरले पहेंलोलाई यसरी बनाउनुभएको छ कि त्यो जहिले पनि अण्डाको बोक्राभित्र आफ्‍नो ठिक ठाउँमै बसिरहन्छ। तिमीले अण्डा फुटाउँदा, अथवा तिम्रो आमाले फुटाउनुहुँदा, भित्रपट्टिको केही बाक्लो र्‍यालजस्तो भागलाई उहाँको औंलाले सफा गरे जस्तो गर्दै स्वाट्ट निकाल्नुहुन्छ। यसरी निकालिएको भाग चाहिँ एक किसिमको डोरीजस्तो हो जोचाहिँ पहेंलो भागको एकातिर टाँसिएको हुन्छ र साथै त्यो बोक्रापट्टि पनि टाँसिएको हुन्छ। यसले अण्डाको पहेंलो भागलाई आफ्‍नै ठाउँमा राखिराख्छ।
अण्डाको पहेंलो भागको बनोट पानी जहाजको जस्तै हुन्छ। त्यसको तल्लो भाग भारी हुन्छ भने त्यसको माथिल्लो भाग हलुका। त्यसैले अण्डाको पहेंलो त्यसलाई वरिपरि घेर्ने सेतोको बीचमा निरन्तर तैरिरहन्छ। पहेंलो भागको यो बनोटले र साथै मैले अघि बताएको त्यो डोरीले, पहेंलोलाई अण्डाभित्र सुल्टो गरी झुण्ड्याइराख्छ, अण्डालाई जतातिर घुमाए पनि वा फर्काए पनि, चाहे मान्छेका औंलाहरूले वा कुखुरी माउले। परमेश्वरले अण्डालाई किन यसरी बनाउनुभयो भने अण्डाभित्र हुने जीवनको कण पहेंलोको सतहमाथि हुन्छ अनि त्यसलाई कुखुरी माउको छातीको नजीकमा राखिनुपर्छ ताकी कुखुरीको शरीरको तापले त्यो चल्ला बढ्न सकोस्। हामीले यहाँ फेरि देख्छौं स्वर्गमा हुनुहुने हाम्रा परमेश्वरको अचम्मको बुद्धि।
स्वर्गमा जिउनुहुने जीवनका प्रभुले तिमीलाई एउटा अति नै आशिषमय जीवन जिउन सहायता गर्नुहुनेछ। जब तिमीले प्रभु येशूलाई लिन्छौ तब ख्रीष्टियन जीवन जिउन र बाइबलमा देखाइएको परमेश्वरको इच्छा पालन गर्न तिमीले सजिलो भएको महसुस गर्नेछौ। बाइबलमा यूहन्ना ४:१४ मा पल्टाएर पढौं। यो जिउँदो पानी भनेको त्यो आशिषले भरिएको अनन्त जीवन हो जुनचाहिँ मुक्तिदाता प्रभु येशूले तिम्रो हृदयभित्र हालिदिनुहुन्छ जब तिमी विश्वासद्वारा उहाँकहाँ आउँछौ।
जब अण्डाभित्र चल्ला बन्ने काम हुन्छ, चल्लाको नाक सधैं अण्डाको फराकिलो पट्टिभित्र भएको हावा भएको सानो कोठामा पर्ने गरीकन बन्दछ। कुखुरा पाल्ने मान्छेलाई सोध्न सकिन्छ, “के तपाईंले कहिल्यै चल्ला उसको नाक अण्डाको साँघुरो भागतिर फर्केर बसेको देख्नुभएको छ?” कसैले त्यस्तो अण्डा भेट्टाउन सक्दैन। यसको कारण छ। यसले फेरि परमेश्वरको बुद्धि देखाउँछ रउहाँ कति असल हुनुहुन्छ भन्ने देखाउँछ। अण्डाको बोक्रा फराकिलो भागपट्टिको तुलनामा साँघुरो भागपट्टि धेरै बाक्लो हुन्छ। यसैले गर्दा चल्लाको नाक फराकिलो भागपट्टि फर्केको हुन्छ जहाँ बोक्रा पातलो हुन्छ। तब, जब चल्ला निस्कन चाहन्छ उसलाई यो फराकिलो पट्टिको बोक्रा फुटाउन गाह्रो पर्दैन। बाक्लो र कडा बोक्रा भएको साँघुरो पट्टिको बोक्रा फुटाएर बाहिर निस्कनुपर्ने हुँदो हो त उसलाई निकै साह्रो-गाह्रो पर्नेथ्यो। चल्लाको चुच्चो ज्यादै नरम हुन्छ। परमेश्वरले चल्लालाई एउटा सानो हतियार नदिनुभएको भए चल्लाले बोक्रा फुटाउनै सक्दैनथ्यो र बाहिर निस्कनै सक्दैथ्यो। प्रभुले अनौठो तरिकाले त्यो चल्लाको नरम चुच्चुको टुप्पामाथि एउटा ज्यादै कडा कोन उम्रन दिनुहुन्छ। यो सानो हतियार अण्डाको बोक्रालाई फुटाउन सक्ने जति कडा हुन्छ। त्योचल्ला बोक्राभित्रबाट बाहिर ननिस्कुन्जेल त्यसको नरम चुच्चोलाई उक्त कडा वस्तुले ढाकिदिन्छ। चल्ला बाहिर निस्केपछि, उक्त सानो कोन, जो झण्डै हड्डीजस्तै कडा हुन्छ, त्यो चल्लाको नाकबाट खस्छ, किनभने चुच्चो चाँडै नै कडा हुँदै जान्छ र उसलाई त्यो कोनको अबउसो आवश्यक पर्नेछैन। साथै, त्यो सानो कोन रहिहँदो हो त चल्लाले आफ्‍नो चुच्चो खोल्नै नसक्ने हुन्थ्यो अनि उसले खान सक्दैनथ्यो। कहिलेकाहिँ त्यो यति कस्सिएको हुन्छ कि कुखुरा पाल्नेले उसको औंलाले त्यसलाई कोट्याएर फाल्नुपर्ने हुन्छ। कुखुराको चल्लाको जीवनको लागि यस्तो उदेकको व्यवस्था गरिदिनुहुने उदेकको परमेश्वर उही परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले तिम्रो जीवनको निम्ति व्यवस्था गरिदिन चाहनुहुन्छ।
चल्ला अण्डाबाट निस्कनुभन्दा दुई दिन अगाडि उसले सास फेर्न थाल्छ। हावा भएको त्यो सानो कोठाभित्र उसलाई ठिक दुई दिनसम्म सास फेर्न पुग्ने हावा हुन्छ। अनि जब उसले त्यहाँ भएको हावाको अन्तिम सास तान्छ र त्यो खाली ठाउँको हावा अब सक्किन्छ, अनि फेरि त्यसले सास तान्न खोज्छ र छटपटाएर त्यसले मुन्टोले झट्का दिन थाल्छ अनि उसले सास फेर्न खोज्दाखोज्दै उसले बोक्रा फुटाउँछ – अनि ऊ एउटा ठूलो नयाँ संसारमा निस्केर आउँछ।
परमेश्वरले कुखुराले जे-जे गर्नलाई बनाउनुभयो ठिक त्यही-त्यही कुरा उनीहरू गर्छन्। अनि प्रिय बाबुनानीहरू हो, तिमीहरूले पनि त्यसै गर्छौ भन्ने म आशा गर्छु। येशूले भन्नुभयो, “हे सबै मेहनत गर्ने र भारीले दबिएकाहरूहो, मकहाँ आऊ र म तिमीलाई विश्राम दिनेछु” (मत्ती ११:२८)। यही मुक्तिदातामाथि आफूले पक्का गरी भरोसा गर अनि उहाँले तिमीलाई यस जीवनभरि र त्यसपछिको जीवनमा पनि सुरक्षित राख्नुहुनेछ।
Translated by Pradesh Shrestha from Uncle Walter’s Animal Stories.
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2020/06/0-7391236981.jpg 1687 2525 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-12-04 15:46:382020-12-04 17:24:22अचम्मको कुखुरा
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2020/06/कोमल-जवाफले-क्रोधलाई-शान्त-पार्छ-तर-रूखा-वचनहरूले-रिस-उठाउँछन्।.png 1080 1615 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-12-04 15:45:182020-12-04 17:25:33केटो कसरी बेइमानी बन्न सिक्यो
के तिमीलाई थाहा थियो? बाचुन्जेल गोही ठूलो हुन छोड्दैन। उसको जीवनको प्रत्येक वर्ष ऊ बढेर झन् ठूलो हुन्छ। गोहीहरू बढेको बढै गरोस्- नगरोस् मानिसहरूलाई खासै वास्ता हुँदैन भनेर परमेश्वर जान्नुहुन्थ्यो, तर घोडाहरू, गाईहरू, कुकुरहरू, बिरालोहरू र कुखुराहरू ठूलो हुन कहिल्यै नरोक्किने हुँदो हो त मानिसलाई गाह्रो पर्छ भनेर उहाँ जान्नुहुन्थ्यो। उहाँले ती पशुहरूलाई ठीक साइजमा पुगेपछि उनीहरूलाई बढ्नदेखि रोक्नुहुन्छ। यदि गाई ठूलो हुँदै हात्तीजत्रो बन्यो भने किसानले एउटा भर्याङ चढेर दूध दुहुनु पर्ने हुन्थ्यो भनेर परमेश्वर जान्नुहुन्थ्यो। यदि तिम्रो कुकुर ठूलो हुन कहिल्यै नछोड्ने हो भने ऊ एकदिन यदि ठूलो हुन्थ्यो कि ऊ घरको ढोकाबाट छिर्न नसक्ने हुन्थ्यो। ऊ घरको भित्र-बाहिर दौडेर जान नसक्ने हुन्थ्यो र तिमी ऊसित खेल्न पाउँदैनथ्यो। परमेश्वर बुद्धिमान हुनुहुन्छ, होइन र? पशुहरू कतिसम्म ठूलो हुनुपर्छ भनेर उहाँ जान्नुहुन्छ।
गोहीको माउले आफ्ना अण्डाहरूलाई बालुवामा वा उसले जम्मा पारेको घाँस वा झारको थुप्रोमाथि पार्छ। उसले २० देखि ९० ओटा अण्डा पार्छ। त्यो त एकदम धेरै जस्तो लाग्छ, होइन र? यो किन हो भने गोहीको बच्चाका धेरै शत्रु हुन्छन् अनि धेरै पटक साना गोहीहरू अरू पशुद्वारा मारिन्छन्। माउ गोहीले केवल २ वा ३ ओटा मात्र अण्डा पार्दो हो त, सबै बच्चाहरू मारिन सक्थे। अनि धेरै समय नबित्दै संसारमा एउटै पनि गोही बाँकी हुँदैनथ्यो। तर जब त्यहाँ ८० वा ९० साना साना गोहीहरू हुन्छन्, तब कतिओटा गोहीहरू ठूलोसम्म बढ्न पाउँछन्। यसरी पृथ्वीमा गोहीहरू सधैं हुन सकून् भनेर परमेश्वरले यसरी पक्का गराउनुभयो।
माउ गोही आफ्ना अण्डामाथि कुखुरीले जस्तै ओथारो बस्दैन। सोच न, ऊ त यति भारी र भद्दा हुन्छ र थ्याच्च बसिदियो भने त उसले ती अण्डाहरूलाई फुटाइहाल्थ्यो। उसले बरु के गर्छ भने, ती अण्डालाई केवल घाम लाग्ने ठाउँमा छोडिदिन्छ। करिब ६ हप्तामा घामको न्यानोले अण्डाहरूलाई बचरा काढ्ने तुल्याउँछ। अनि त्यसपछि ती गोहीका बच्चाहरू निस्केर उनीहरूले आफ्ना लागि आफै खानेकुरा खोज्नुपर्छ।
साथै गोहीको ज्यादै अनौठो मुख हुन्छ। त्यसका मुन्तिरका दाँतहरू माथिल्लो जबडामा भएका विशेष खोपिल्टाहरूमा फिट हुन्छन्, ताल्चा जस्तै गरी; अनि यदि कुनै पनि कुरा ती जबडाहरूभित्र पर्न गयो भने, त्यो उम्कन सक्दैन। त्यस्तो मुखभित्र टाउको छिराएर हेर्न त तिमीलाई इच्छा छैन होला। यदि हेर्न गयौ भने तिमीले के देख्यौ भनेर हामीलाई बताउन तिमी फर्केर त आउन सक्दैनथ्यौ।
गोहीले आफ्नो खानेकुरा पानीमुनि बसेर चपाउन सक्छ। यदि उसले नदीको किनारमा कुनै पशुलाई पक्र्यो भने उसले आफ्नो मुखमा आफ्नो शिकार बोकेर ऊ हतार-हतार पानीभित्र छिर्न सक्छ, र पानीमुनि बसेर त्यसलाई चपाउन सक्छ। तर गोहीले पानीमुनि छँदा निल्न भने सक्दैन, अनि त्यसैले उसले आफ्नो खाना खान, ऊ कुनै खसेको रूखको मुढामाथि वा किनारतिर चढ्नुपर्छ। उसको घाँटीमा एउटा ठूलो ढोकाजस्तै हुन्छ जसले यस्तो किसिमले काम गर्छ कि यदि उसले पानीमुनि छँदै उसले निल्न थालेको खण्डमा ऊ निसास्सिन्छ र उसले सास फेर्न नसकेर मर्छ।
यस्तो हुनुमा ठ्याक्कै कारण के हो हामी जान्दैनौं तर परमेश्वरले गोहीलाई यसरी बनाउनुभएकोमा उहाँको कुनै न कुनै कारण छ भनेर हामी जान्दछौं। उहाँले गर्नुहुने सबै कामकुराको बारेमा हामीलाई एकएक कारण बताउनुभएको छैन, तर हामीलाई उहाँको बुद्धिमा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई भन्नुभएको छ। बाइबलले भन्दछ, “धर्मी जन विश्वासद्वारा जिउनेछ” गलाती ३:११। हामीले परेमश्वरको बारेमा सबै कुरा कहिल्यै बुझ्न सक्दैनौं। वास्तवमा हामीले उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ भनेर खास सानो भाग मात्र बुझ्न सक्छौं। बाइबलले बताउँछ कि अब्राहामले परमेश्वरमा विश्वास गरे अनि यो उसको निम्ति धार्मिकता गनियो रोमी ४:३। यहाँ एउटा कुरामा ध्यान देऊ – कि यहाँ अब्राहमले परमेश्वरलाई बुझे भनिएको छैन, तर उसले उहाँमाथि विश्वास गरे भनेको छ। यसमा निकै ठूलो भिन्नता छ नि, हो कि होइन?
एक पटक अफ्रिकामा भएका एकजना मिसनरी, सुसमाचार प्रचारक, अफ्रिकाको जाम्बेसी नदीको किनारै किनार हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ हिँड्दै गर्दा त्यहाँ एउटा गुँडमा उनले दुईटा गोहीका अण्डाहरू देख्नुभयो। ती अण्डा तिम्रो हात जत्तिकै लामा थिए। उहाँले यो देख्नुभयो गर्नुभयो कि एउटा अण्डा थोरै चर्केको थियो। अनि त्यसैले उहाँ त्यसको छेवैमा हेरी बस्नुभयो त्यो अण्डाबाट बच्चा निस्कन्छ कि निस्कँदैन भनेर हेर्नलाई। चर्केको ठाउँमा अझ अलिक चर्क्यो, अनि एकछिन पछी अझ चर्क्यो। त्यसपछि पूरै अण्डा चर्केर पूरै खुल्यो र त्यसबाट एउटा बच्चा गोही बाहिर निस्क्यो। त्यो करिब १२ इञ्च लामो थियो अनि बिचारा ऊ त्यो सानो अण्डाभित्र लामो समयदेखि बस्दा-बस्दा उसको जीउ कक्रक्क र अरठ्ठ परेको थियो। उसले आफूलाई बालुवामाथि लमतन्न पारेर तन्कायो, उसको टाउको चाहिँ जङ्गलतिर फर्केको थियो, नदीको ठीक उल्टो दिशातिर। मिसनरीलाई यस्तो लाग्यो अब यसले के गर्नुपर्छ भनेर उसलाई थाह हुन्छ कि हुँदैन होला।
एक घण्टा जति घाममा आराम गरेपछि त्यो गोही फनक्क फर्क्यो र नदीतिर लम्किन थाल्यो। अब कसरी जान्यो त्यो सानो गोहीले ऊ पानीमा बस्ने पशु हो भनेर? के कसैले उसलाई पौडन सिकायो? अहँ, उसलाई नसिकाईकनै उसले पौडन जान्दथ्यो। त्यो गोही नदीतिर लाग्दै गर्दा, मिसनरीले आफ्नो औंलालाई गोहीको सानो नाकको माथितिर लगेर देखाउनुभयो। सानो गोहीले के गर्यो होला थाह छ? ऊ त्यो औंलालाई ताकेर फुत्रुक्कै उफ्र्यो मानौं उसका ती धारिला र नयाँ दाँतले टोकूँला जस्तै गरी। मिसनरीले समयमै आफ्नो औंला फुत्त झिक्नुभयो अनि त्यो सानो गोही नदीतिर छिटोछिटो लागिहाल्यो। कसले बतायो त्यो गोहीलाई उसका शत्रुहरू हुन्छन् भनेर? कसले सिकायो उसलाई त्यस्तो खराब स्वभाव देखाउनलाई? के कतै स्कूल छ जहाँ गोहीहरू गएर बस्न सक्छन् लहरै पछाडिका खुट्टामा उभिएर अनि ब्ल्याकबोर्डलाई हेरेर सिक्न? यो सिक्न कि यदि मान्छेले आफ्नो औंला उसको मुख वा नाकको ज्यादै नजिक ल्यायो भने उसले के गर्नुपर्छ? छैन जस्तो लाग्छ त्यस्तो स्कूल, छ र?
गोहीले यी सबै कुरा जान्दछ उसलाई परेमश्वरले दिनुभएको उसको पशु स्वभावको कारणले। हामीले जतिसुकै उसलाई सिकाए पनि गोहीलाई बदलेर अर्को स्वभावको बनाउन सकिँदैन। त्यो बदलिन सक्ने एउटै मात्र तरिका छ। परमेश्वरले उसलाई एउटा नयाँ स्वभाव दिनुभयो भने मात्र बदलिन सक्छ।
बाबु नानीहरू, पुरुष स्त्रीहरूको सम्बन्धमा पनि यस्तै हुन्छ। हामी जन्मने बित्तिकै हामीले गलत-गलत कामहरू गर्ने तरिका जान्न थाल्छौं। हामी धेरै सानो हुँदै हामीले नराम्रा कामहरू गर्न सिक्छौं। प्रभु येशूले हामीलाई बदल्नुभएर हामीले नयाँ जन्म नपाएसम्म हामीले केवल हाम्रो खराब, पापी स्वभावले हामीलाई गराउने कामहरू गरिरहन्छौं। येशू ख्रीष्टले तिमीहरू एकएकजनालाई बचाउन चाहनुहुन्छ र एउटा नयाँ स्वभाव दिन चाहनुहुन्छ, जुन स्वभावले परमेश्वरलाई खुशी पार्ने कामकुराहरू गर्न चाहन्छ। यदि तिमीले आफ्नो आत्माको लागि उहाँमाथि भरोसा गर्छौ भने उहाँले तिमीलाई उहाँमा एउटा नयाँ व्यक्ति बनाउनुहुनेछ।
यर्मिया १३:२३ के कूशीले आफ्‍नो छाला वा चितुवाले आफ्‍ना थोप्लाहरू बदल्न सक्छ र? तब ता तिमीहरूले पनि, जो खराबी गर्नमा अभ्यस्त भएका छौ, असल गर्न सकौला।
२ कोरिन्थी ५:१७ येसैकारण कोही ख्रीष्टमा छ भने ऊ एउटा नयाँ सृष्टि हो, पुराना कुराहरू बितिगएका छन्; हेर सबै कुराहरू नयाँ भएका छन्।
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2020/09/Blue-and-Cream-Science-Fiction-Book-Cover.jpg 855 1410 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-12-04 15:42:542020-12-04 17:23:24गोही